Android အတွက် အကောင်းဆုံး ဦးခေါင်းကြီး ဘောလုံးဂိမ်း3ခု | Androidsis
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြည့်အများဆုံးနှင့် လူသိအများဆုံး အားကစားတစ်ခုမှာ ဘောလုံးဖြစ်ပြီး အားကစားတစ်ခုအပြင် ယင်းကဲ့သို့ နာမည်ကြီးကစားသမားများနှင့် အောင်မြင်ကျော်ကြားသော ကလပ်အသင်းများကို ခေါ်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးအဆမတန်များပြားသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ဤအားကစားအတွက်သာမက ကွန်ဆိုးလ်များ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာများအတွက်လည်း မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းအများအပြားရှိသည်။ သင်ရှာနေလျှင် bighead ဘောလုံးဂိမ်းများ၊ ဤစုစည်းမှုကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ဘောလုံးပွဲအများစု ကစားကြသည်။ ရယ်စရာကောင်းတာက ခေါင်းကြီးတဲ့သူတွေ။ ဂိမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ သင်နဲ့ နာရီပေါင်းများစွာ ကစားရမယ့် အလွန်ခေါင်းမာတဲ့ ရုပ်ပြရုပ်သွင်နဲ့ အရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ စာရင်းတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲ ၅ ပွဲ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများ၏ အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။
Android အတွက် ဦးခေါင်းကြီးသော ဇာတ်ကောင်များပါသော အကောင်းဆုံး ဘောလုံးဂိမ်းငါးခုကို သင့်အား စုစည်းတင်ပြထားပြီး ထို့ကြောင့် သင်သည် Play Store တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရှာတွေ့မည့်ဂိမ်းအားလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကိုခံစားရန် သင်ဘာမှပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်း သတိရပါ။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ထဲကတချို့က ဂိမ်းထဲမှာ ငွေပေးချေမှုစနစ်ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ၎င်းသည် သင့်အား ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် အဆင့်များတွင်ကစားရန်အခွင့်အရေးများ ၊ နောက်ထပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆုလက်ဆောင်များနှင့် အခြားအရာများစွာကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ ကစားခြင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် မည်သည့်ငွေပေးချေရန်မလိုအပ်ကြောင်း သတိရပါ။ ပြီးရင်တော့ ကျနော်တို့ စာရင်းကို ဖြတ်သွားပါ။
1 Head Ball2- အွန်လိုင်းဘောလုံးဂိမ်း
2 ရုပ်သေးဘောလုံးချန်ပီယံ - လိဂ်
3 ဦး ခေါင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ LaLiga - Football Games 2021
Head Ball2- အွန်လိုင်းဘောလုံးဂိမ်း
Head Ball2- အွန်လိုင်းဘောလုံးဂိမ်းသည် ခေါင်းကြီးဘောဂိမ်းအားလုံး၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းတွင် ကြီးမားသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ရှိပြီး Facebook မှ လေးနက်သော သူငယ်ချင်းများနှင့် ကစားရန် ဂိမ်းမုဒ်လည်း ပါ၀င်သည် (ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် အကောင့်ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော်လည်း)။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် တကယ့်လူများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်သောကြောင့် ဂိမ်းသည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းရှိသည်။
၎င်းတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကစားသမားများနှင့်အတူ 1 vs 1 မုဒ်ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် အဆင့်မြင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်ကို သတိပြုမိသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် အတတ်နိုင်ဆုံး လေ့ကျင့်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို အနိုင်ယူသင့်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအပြင် မတူညီသောလိဂ်5ခုအထိရှိပြီး လိဂ်ခွဲ 15 ခုအထိရှိသည်။ အဲဒီအတွက် ကမ္ဘာပေါ်က ကျန်တဲ့ ကစားသမားတွေကို သူတို့နဲ့ တိုင်းတာဖို့ သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင် ဇာတ်ကောင်များ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဝင်ငွေနှင့် လော့ခ်ဖွင့်ခွင့်ပြုသည့် Career မုဒ်လည်း ပါဝင်သည်။
ယခုတိုငျအောငျ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင် 125 အကြားသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့အရသာနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်။ Head Ball2တွင် သင့်ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို အနိုင်ယူရန် အစွမ်းထက်သောအသင်းတစ်သင်းကို ဖန်တီးရန် စီမံပါ။ ဖြတ်သန်းမှုများ သို့မဟုတ် ဂိုးများသွင်းခြင်းအပြင် ကူညီပေးမည့် စူပါပါဝါများ (ရရှိနိုင် 18) တို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ သင်ဝင်ငွေရရန်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပြင် အားကစားကွင်းများနှင့် ပရိသတ်များ ပိုမိုဖျော်ဖြေမှုရရန် သင်လည်း လော့ခ်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Head Ball2- အွန်လိုင်းဘောလုံး
ရေးသားသူ: Masomo ဂိမ်း
ရုပ်သေးဘောလုံးချန်ပီယံ - လိဂ်
ကြီးမြတ်သောနောက်တစ်ခုဘောလုံးပွဲများ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးကစားသမားများမှ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ဟာသဇာတ်ကောင်များပါရှိသည့် Puppet Soccer Champions – League ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပွဲအားလုံးကို အနိုင်ရရန် သင်ထိန်းချုပ်ရမည့် ရုပ်သေးရုပ်များဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ဘောလုံးခေါင်းပေါင်း ကိုးဆယ်ကျော်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာ ရွေးချယ်စရာရွေးချယ်စရာတွေ အမြဲရှိနေလို့ မပျင်းပါနဲ့။ ၎င်းတွင်ဘောလုံးရုပ်သေးအဖွဲ့ 30 ကျော်ရှိသည်။ ဂိမ်း၏စက်ပြင်များသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ၎င်းအတွက် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော ဂရပ်ဖစ်နှင့် ကာတွန်းများကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရုပ်သေးဘောလုံးချန်ပီယံ - လိဂ် ၎င်းတွင် တူညီသော Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့် အတူတကွ ကစားနိုင်သော်လည်း မျက်နှာပြင်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ကစားနိုင်စေမည့် ကစားသမားနှစ်ဦးမုဒ်ပါရှိသည်။ သူ့ရဲ့ ဒိုင်းနမစ်တွေဟာ အလွန်ကွဲပြားပါတယ်၊ ခုန်ပေါက်နိုင်မှု၊ ဖြတ်ကျော်မှုတွေ၊ အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်မှု၊ ပြစ်ချက်တွေနဲ့ အခြားအရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ဂိမ်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ပြိုင်ပွဲများနှင့် ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်ပွဲရရှိရန် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်းás မှာ မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေ တတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိပြီး အဲ့ဒါက မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ရဖို့ ခက်ခဲစေတယ်။. ဂိမ်းအတွင်း၌ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ကစားခြင်းအပြင် အခြားအရာများစွာကို ဝယ်ယူနိုင်စေရန် စိန်များပါသော ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။
ရေးသားသူ: NOXGAMES များ
ဦး ခေါင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ LaLiga - Football Games 2021
ကျွန်ုပ်တို့သည် Head Football LaLiga နှင့်အတူ ဤစုစည်းမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကစားသမားအသိုင်းအဝိုင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် Play Store တွင် ဒေါင်းလုဒ် 10 သန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၎င်း၏ ပီပြင်သော ဂရပ်ဖစ်နှင့် ကာတွန်းများဖြင့် သင့်ကို အံ့အားသင့်စေမည့် ဖျော်ဖြေမှုအရှိဆုံး ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဤဂိမ်း၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ ၎င်းတို့နှင့် သင်နှစ်သက်သလို ကစားနိုင်သည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ဇာတ်ကောင်များပါရှိသည်။n Luis Suarez နှင့် Karim Benzema၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စပိန်လိဂ်က ကစားသမားတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်း၏အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မပြုလုပ်ပါ။ ကစားနိုင်ရန် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အော့ဖ်လိုင်းကစားနိုင်ပြီး ခက်ခဲမှုအဆင့်မြင့်သည့် နာမည်ကြီးပြိုင်ပွဲများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် သင်မပျင်းဘဲ အမြဲတမ်းပျော်နေစေရန်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအများစုကို အနိုင်ရရန်အတွက် သင်သည် သင့်ဇာတ်ကောင်များ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကစားခြင်းဖြင့် ဆုများနှင့် ဆုလာဘ်များကို သော့ဖွင့်ခြင်းဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင်ရှိသော ကစားသမားတစ်ဦးစီ၏ စွမ်းရည်များကို တစ်ဦးချင်း မြှင့်တင်နိုင်သည်၊ မြန်နှုန်း၊ ဂိုးပေါ်မှရိုက်ချက်များ၊ ခုန်ခြင်း၊ အရွယ်အစားနှင့် အခြားအရာများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အောင်ပွဲများပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိရန် ကူညီပေးပါမည်။ Giant Ball၊ Destroyer Ray၊ Gigantation နှင့် Super Shot ကဲ့သို့သော လေးပစ်ရိုက်ချက်များကို အလွန်အားကောင်းစေသောကြောင့် ပါဝါများသည် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လည်း, Head Football LaLiga သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ ဆင်တူသည့် ဘောလုံးသမားကို ဖန်တီးနိုင်စေရန် ဇာတ်ကောင်များကို ဖန်တီး တည်းဖြတ်နိုင်စေပါသည်။
ရေးသားသူ: La Liga Nacional de Fútbolပရော်ဖက်ရှင်နယ်
ဒီသုံးပါးကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အကြီးစားဘောလုံးဂိမ်းများ ၎င်းတို့သည် သင့်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုပြည့်မီမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို စမ်းကြည့်ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက် အကောင်းဆုံး အကြီးစား ဘောလုံးဂိမ်း3ခု
msgstore ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ